कुखुराको भालेको पनि बन्ध्याकरण | OnlineChautari.com
January 25, 2017 | 11:49 am
पाल्पा । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर यो सत्य घटना हो । कुखुराको पनि परिवार नियोजन हुन्छ भन्दा अब नौलो मान्नु पर्दैन । कुखुराको भालेमा बन्ध्याकरण सफल बन्दै गएपछि अब अच्चम मान्नु पर्दैन ।
कुखुरापालन गर्ने पन्तले कुखुराको परिवार नियोजन गर्दा मासु एक इन्चसम्म बाक्लो हुने र तौल पाँचदेखि सात किलोसम्म बढ्ने बताए । पहिले कुखुराको अण्डकोष निकाल्न निकै समस्या भएपनि अहिले सहजरुपमा बन्ध्याकरण हुने गरेको उनले बताए ।
पन्तको पशुपन्छीसम्बन्धी औपचारिक अध्ययन नभए पनि दाङका ध्रुव बस्नेतसँग फोनमार्फत जानकारी लिई कुखुराको परिवार नियोजन गर्न थालेको बताए ।
सुरुसुरुमा केही कुखुरा मरेपनि अहिले कुखुराको शल्यक्रिया सफल भएको उनको दाबी छ ।
कुखुरा शल्यक्रियापछि चिल्लो हँुदै जाने र यौन क्षमता कमजोर हँुदै जाने उनको दाबी छ । स्थानीय प्रजातिका कुखुरामा मात्र अण्डकोष निकाल्न सम्भव हुने गर्दछ । ब्वायलर प्रजातिका कुखुरामा अण्डकोष निकाल्ने काम भने उनले गरेका छैन । पहिले रहरका लागि गरिएको यो काम अहिले अनुसन्धानमूलक भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पाल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा गोरु, बोका, सुँगुर र बङ्गुरको अण्डकोष निकाल्ने चलन रहिआएको बूढापाकाहरु बताउँछन् । अण्डकोष निकाल्दा यौन क्षमता कमजोर भई शान्त स्वभावको बढी हुने हुँदा मासुको उत्पादन बढी हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
करिब पाँच–सात वर्षदेखि कुखुराको शल्यक्रियामार्फत बन्ध्याकरण गर्ने काममा उनले सफलता पाएका छन् ।
आजभोलीका युवा पुष्तामा ट्याटु बनाउने फेशनले जरा गाडेको छ । बिशेसगरी हात, कम्मर, गर्धन र बक्षस्थलमा ट्याटु ओपिने गरिन्छ ।…
यस्तो छ हस्तमैथुनको इतिहास
एजेन्सी । पाषाण एवं मध्यकालीन युगमा ढुंगा तथा चट्टानमा बनाइएको चित्रले के पुष्टि गर्छन् भने हस्तमैथुन आज मात्र होइन, सदियौं…
जहाँ नवबिबाहितलाई तीन दिनसम्म शौचालय जान दिइन्न
एजेन्सी । बिश्वमा रहेका हरेक जातिहरुको आ आफ्नै मौलिक परम्पराहरु रहेको हुन्छ । एक जातीको परम्परा अर्को जातीलाई अनौठो लाग्नु…
कागले दिन्छ शुभ-अशुभ समयको सूचना, यसरी चिनौं कागको भाषा
सनिबारबाट १६ दिनसम्म चल्ने श्राद्ध पक्षको शुरुवात भएको छ । श्राद्ध पक्षमा पितृलाई प्रसन्न गर्नको लागि श्राद्ध गरी तर्पण, पिंडदान…
यसरी निकालियो अजिंगरको पेटबाट २ ओटा बाख्रा (भिडियो)
अमेरिकी ज्योतिषको भविष्यवाणीः अक्टोबर २ मा संसारको अन्त्य हुनेछ (भिडियोसहित)
कसरी बन्छ त कण्डम ? हेरौं भिडियो !
तान्त्रिकले मागे १६ वर्षे युवती, आफ्नै बहिनीको बलि चढाउने तयारी
बुलफाइटरको रिंगभित्रै मृत्यु (भिडियोसहित)
यो सेक्स डलले जापानमा बिहेदर घट्यो